Ho an’ireo fianakaviana Kiobàna monina any ivelany , manova ny zava-drehetra ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Ho an'ireo fianakaviana Kiobàna monina any ivelany , manova ny zava-drehetra ny aterineto
Mpanoratra Periodismo de Barrio Nandika (en) i Laura, Gwenaëlle Lefeuvre, Liva Andriamanantena
Voadika ny 03 Septambra 2018 14:22 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Français, русский, 日本語, Português, Español
Sary nataon'i MONK (Periodismo de Barrio). Navoaka indray niaraka tamin'ny fahazoan-dàlana.
Fanavaozan-dahatsoratra nivoaka tao amin'ny Periodismo de Barrio ity lahatsoratra ity. Amin'ny teny Espaniola ny rohy raha tsy misy fanamarihana manokana.
Teo akaikin'ny toera-malalaka iray misy Wifi maimaim-poana ho an'ny daholobe ao La Havane, mifandimbindimby mankeo anoloan'ny tablette ny fianakaviana iray miisa enina. Miresaka haingana ny tsirairay, fandrao tapaka ny antso.
“Zokilahy a,” hoy ny iray tamin'ireo lehilahy, “tsara ireo kiraro nalefanao fa tsy tahaka ireo atinakanjo ambony miloko. Aza adinoina fa tokony ho vaovao sy fotsy ny rehetra .” Ity lehilahy ity dia mila akanjo hanombohany ny santero, mafana fo amin'ny fivavahana santería [fr]. Nampanantena ny hitady izay ilainy ny rahalahiny. “Mbola misy zavatra maro tsy hitako noho ny fiteny,” hoy izy nanazava.
Re eny amin'ny zaridaina rehetra misy Wi-Fi manerana an'i Kiobà ny resadresaka toy izany. Araka ny Foibe misahana ny fanisana ny mponina (CEDEM) ao amin'ny Oniversiten'i La Havane, manana fianakaviana any ivelany ny Kiobana iray amin'ny telo. Naminavina ny mpahay toekarena sady manampahaizana manokana momba ny fanisana ny mponina ao amin'ny CEDEM Juan Carlos Albizu-Campos fa ho very mponina miisa 40.000 mahery isan-taona hatramin'ny taona 2030 i Kiobà, amin'ny mponina miisa 10 tapitrisa.
Amin'ny tranga maro, ny mpifindra monina no mpanohana ara-bola ireo fianakaviany mijanona ao amin'ny fireneny. Nilaza ny Havana Consulting Group, any Miami, fa 3 tapitrisa euros no nalefa tany Kiobà avy any Etazonia tamin'ny taona 2017.
Fanantenana vaovao ho an'ny fianakaviana: fivoriana an-tserasera hatrany amin'ny “Toeram-piterahana iraisampirenena”
Ankehitriny, toerana miisa 635 no misy Wi-Fi maimaimpoana ho an'ny vahoaka any Kiobà, ary fifandraisana vaovao sambany ahafahan'ny fianakaviana mifandray izany.
Ao amin'ny zaridaina mifanila amin'ny Toeram-piterahana Américas Arias any La Havane, vehivavy am-polony no mivezivezy eo, sady faly no mitaintaina. Miresaka an-telefonina sady mihomehy ny sasany ary ny hafa kosa mitomany mafy.
“Handeha ao amin'ny WhatsApp aho izao ary holazaiko azy fa bevohoka aho”, hoy ny vehivavy iray tamin'ny iray hafa.
Sary nataon'i: MONK (Periodismo de Barrio). Navoaka indray niaraka tamin'ny fahazoan-dàlana.
Tamin'ny taona 2017, nandalina momba ny fanantenana vaovao ho an'ny fianakaviana Kiobana ny Foibe Fikarohana ara-psykolojika sy ara-tsosialy . Araka ny voalazan'ny talen'ny fikarohana, Milagros Samón, mahazatra ao Kiobà ny “fianakaviana monina any ivelany”, izay ahitana mpikambana iray ao amin'izany fianakaviana izany nifindra monina mba hitady fiainana tsara kokoa. “Matetika,” hoy ny fanazavany, “io ao amin'ny ianakaviana lasa any ivelany io no mandefa vola ho an'ny ankohonany sy miandraikitra ny toeran'ny loham-pianakaviana sady mpanapa-kevitra voalohany, na dia any ivelany aza izy. Mampihena ny halaviran-toerana ary mahatonga ny fomba ho voajanahary kokoa ireo toerana misy Wi-Fi ireo. “
Niresaka tamin'ny reniny ny ankizivavy iray tamin'ny resadresaka iray hafa henonay tao an-jaridaina .
“Nosaziany aho,” hoy izy tamin'ny namany. “Tsy afaka mandeha amin'ny fetin'ny Asabotsy alina aho.
— “Ahoana anefa no hanasaziany anao avy any alavitra any?
— Fehezina avy any ny zava-drehetra . “
Nanazava ilay tovovavy fa alefan'ny rahavaviny any amin-dreniny ny kahieny ary ny reniny indray no mandefa ny vaovao any amin'ny nenitoany, izay tonga ao amin'ilay zaridaina amin'ny hariva mba hifandray aminy.
“Raha hitan'izy ireo fa misy zavatra hafeniko dia azon'izy ireo atao ny maka ny X-Box aty amiko. Mandrahona ahy foana izy ireo amin'ny fakana ny findaiko sy ny lalaoko. “
Any amin'ny zaridaina iray hafa, eo ambanin'ny jiron'ny arabe, Rosa, 56 taona, miresaka amin'ny fianakaviany amin'ny aterineto saika isan'alina mandritra ny antsasakadiny. Any Miami ny zanany vavy ary mitsidika azy tsy tapaka, saingy tsy nahita ny zanany lahy izy, izay mipetraka any Texas nanomboka tamin'ny taona 2012.
“Manampy ahy amin'ny fahasalamako ny fiantsoana ny fianakaviako ,” hoy izy. “Raha tsy mbola nisy Wi-Fi teto Kiobà dia tsy afaka niresaka tamin'izy ireo afa-tsy tamin'ny andro nahaterahana aho na rehefa faran'ny taona. Maro tokoa ny zavatra tsy hitako. “
Nahatsiaro ny antso voalohany nataony niaraka tamin'ny sary mivantana i Rosa, izay nahitany ny zanany lahy mivantana tamin'ny fampiasa IMO. Niresaka nandritra ny adiny telo izy ireo mandra-pahatapitry ny baterian'ny finday .
Nanazava i Rosa fa te hahita ny zava-drehetra izy, toy ny hoe tany an-toerana niaraka tamin'ny zanany lahy. “Asehoy ahy ny tranonao, ny efitranon'ny ankizy, izay ao anaty vata fampangatsiahanao,” hoy izy taminy. Nihomehy izy mba tsy hitomaniany, satria na dia mahatsiaro ho sambatra aza izy dia tsy nieritreritra afa-tsy ny fotoana hiverenan'ny zanany lahy izay niala tany Kiobà tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Tamin'ny voalohandohan'ny taona 2018, nanambara ny governemanta fa mety hahazo alàlana hiverina ny olom-pirenana Kiobana nifindra monina tsy ara-dalàna, ary ahitàna ireo nitsoaka an-daharana rehefa tonga tany ivelany, toy ny dokotera sy ny mpanao fanatanjahantena ity fepetra ity.
Tao amin'ny asakaroka hahazoana diplaoma maîtrise iray mitondra ny lohateny hoe “Fiterahana miampita firenena”, nanamarika ilay manam-pahaizana mpandinika ny fiarahamonina Deborah Betancourt fa “ny antsoina hoe fianakaviana miampita firenena […] dia mamaritra ny rohim-panakaviana tsy tapaka fa mihamafy, na dia eo aza ny elanelana ara-jeografika eo amin'ny mpifindramonina sy ny fianakaviany. Mifototra amin'ny singa roa manan-danja ny fifandraisana toy izany : ny fitaovam-pifandraisana sy ny fandefasana [vola]. “
Lalàna vaovao momba ny fidirana amin'ny aterineto sy ny tolotra vaovao
Sarin'i Ismario Rodríguez (Periodismo de Barrio). Navoaka indray niaraka tamin'ny fahazoan-dàlana.
Tamin'ny taona 2013, namoaka ny Fanapaha-kevitra laharana faha 197/2013 ny Minisiteran'ny Fifandraisandavitra ary nankatoa ny fampiroboroboana ny fidirana amin'ny aterineto. Hatramin'izay fotoana izay dia tsy afaka nifandray afa-tsy hatrany amin'ny hotely sasantsasany mihoatra ny 4 pesos Kiobana isan'ora (CUC, eo ho eo amin'ny 4 dolara amerikana eo na 3,40 euro) ny olona.
Tamin'ny taona 2015, afaka nifandray tamin'ny alàlan'ny toerana misy Wi-Fi ihany ny mponina Kiobana rehefa nanambara ny famoahana ny Wi-Fi miisa 35 ho an'ny daholobe ny mpanome tolotra Empresa de Telecomunicaciones SA (ETECSA) ao Kioba. Tamin'ny volana Desambra 2017, nanambara ny fampidirana ireo tolotra aterineto ho an'ny finday ho an'ny taona 2018 ny ETECSA .
Mitentina 1 CUC isan'ora ny fifandraisana amin'ny Aterineto amin'izao fotoana izao, izay misondrotra hatrany, raha oharina amin'ny karaman'ny Kiobana amin'ny ankapobeny isam-bolana izay 30 CUC.
“Hiantso anao isan'andro aho”
Indray alina, tao amin'ny zaridaina misy Wi-Fi iray dia nisy vehivavy nivezivezy sady nigogogogo nitomany, niaraka tamin'ny finday teny an-tsofiny. Niangavy ilay olona niresaka taminy tamin'ny finday izy mba hanome azy fanazavana bebe kokoa:
“Aiza ianao? Fantatrao ve ny iray tamin'ireo ankizilahy maty? … Inona no lazain'ny fampitam-baovao ? … Tsy hitako ilay nolazain'ity Trump adala ity, fa reko fotsiny izany.” Nahitana vazavaza, fokofoko, fanomezan-tsiny ny resadresaka. “Ahoana no ahafahan'ny olona amin'ny taonanao toy izao mahazo basy? … Hiantso anao isan'andro aho. Omeo ahy ny rainao, azafady. “
Niresaka tamin'ity vehivavy ity izahay tatỳ aoriana ary fantatra fa monina any amin'ny faritr'i Broward, Florida ny zanany lahy 17 taona. Talohan'io andro io ihany dia nisy fifampitifirana nitranga tao amin'ny lisea Marjory Stoneman Douglas izay nahafatesana mpianatra miisa 17. Mianatra any amin'ny lisea hafa ny zanany lahy, saingy taitra izy rehefa nandre ny vaovao. Te-haheno ny feony fotsiny izy .